ल्यापटप एसस A52J: विशेषताहरु र समीक्षा
ASUS - सबै भन्दा प्रसिद्ध कम्पनीहरु, उनको लागि ल्याप्टप, स्मार्ट फोन र अन्य उपकरण, साथै सामान को रिलीज मा लगे को एक। कम्पनी तरिका फिर्ता 1989 मा स्थापित भएको थियो। र 25 भन्दा बढि वर्षसम्म एसस देखि विशेषज्ञहरु आफ्नो क्रान्तिकारी प्रविधि हामीलाई प्रसन्न हुन्छु। यस लेखमा हामी हालै प्रकाशित एसस A52J भनिन्छ बच्चा छलफल हुनेछ। यो ल्यापटप बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि यो लेख तपाईं को लागि हो।
ल्याप्टप को नजर एकदम आकर्षक छ। ASUS A52J ASUS को खण्ड अन्तर्गत आउँदै उपकरणहरूको लागि विशिष्ट छ कि एक सुव्यवस्थित शैलीमा डिजाइन गरिएको छ। को चमकदार ढक्कन र शरीर एक unobtrusive डिजाइन ढाकिएको छन्। भौतिक लागि को रूप मा, एसस A52J शरीर मजबूत मैट प्लास्टिक बनेको छ। यो राम्रो, चिल्लो स्पर्श गर्न सुखद छ।
अन्य कुराहरु, यन्त्र एकदम संकुचित छ। एसस ल्यापटपबाट विशेषज्ञहरु सबैभन्दा दैनिक प्रयोगको लागि सुविधाजनक बनाउन प्रयास। यो एसस कुनै पनि समय A52J त्यसैले तपाईं कहीं लाग्न सक्छ, यो पातलो खोल बनेको छ यो कारण लागि हो। यो उपकरण को एक विशेष लाभ छ।
ASUS A52J: निर्दिष्टीकरण
एसस एक नयाँ ल्यापटप को "बोर्ड" मा एकदम शक्तिशाली "फलाम" छ। A52J नवीनतम इंटेल कोर प्रोसेसर लाइन (मोडेल i3-350M) संग सुसज्जित। बारेमा 2.26 gigahertz अधिकतम घडी आवृत्ति। प्रोसेसर पूर्ण धेरै अनुप्रयोगहरूको साथ सञ्चालन समयमा आफूलाई देखाउँछन्। यदि कम्प्युटिङ उपकरण लोडमा छ, अर्को प्रोसेसर गर्न कदम को लोड। यो प्रविधि कुनै पनि ढिलाइ र सुस्त बिना लगातार सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ।
भिडियोको लागि को रूप मा, बदनाम, AMD देखि एसस A52J लायक RadeonHD। विस्थापन प्रकार DDR3 VRAM लगभग 1 गिगाबाइट छ। यो तस्बिर प्रक्रिया र एक विभाजित दोस्रो लागि पर्दामा प्रदर्शित छ संग।
एक को सबै भन्दा शक्तिशाली नोटबुक मध्यम वर्ग - एसस A52J। प्रयोगकर्ताहरूको प्रतिक्रिया झूठ छैन। Tandem ग्राफिक्स प्रोसेसर र एक राम्रो प्रसंस्करण शक्ति प्रदान गर्दछ। किनभने धेरै समस्या बिना यो एसस A52J को पनि भारी ग्राफिक्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, ल्यापटप कम वा मध्यम सेटिङहरू अधिकांश आधुनिक खेल पुल हुनेछ। के कम प्रदर्शन आवश्यक छ कि कार्यहरु बारेमा कुरा गर्न साँच्चै छ। , इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ चलचित्र हेर्दै र संगीत एसस A52J सुनेर एक धमाका साथ copes।
को एसस A52J प्रविधी धेरै कि, काम मा अधिकतम सुविधा Ergonomics हासिल गर्न अनुमति छन्। उदाहरणका लागि, बहु टचप्याड। उहाँले पनि केही औंलाहरु को स्पर्श कसरी ह्यान्डल गर्न थाह छ। र यो यस्तो छवि मापन रूपमा कार्यहरू वेब पृष्ठहरू स्क्रोल समयमा धेरै सुविधाजनक छ। यसबाहेक, नयाँ टचप्याड पूर्णतया मानक माउस प्रतिस्थापन गर्न सक्षम छ।
हामी टचप्याड गर्न गरिएका कुरा भने, यो पाम प्रमाण सिस्टम उल्लेख लायक छ। औँला वा पाम - धन्यवाद उनको लागि, ल्यापटप टच प्याड थिचेर गर्दा प्रयोगकर्ता के संलग्न छ भेद गर्न सक्षम छ। दोस्रो अवस्थामा, यन्त्र थिचेर गर्न प्रतिक्रिया गर्दैन। गति टाइप गर्दा यो आकस्मिक कर्सर आन्दोलन रोक्छ।
पनि Power4Gear भनिने सिस्टम योग्य हुनुहुन्छ। यो शक्ति खपत नियन्त्रण गर्दछ। यो, बारी मा, एक ब्याट्री बचत प्रदान गर्दछ र उपकरण बढि शान्त सञ्चालन बढवा दिन्छ।
साथै, ल्यापटप मा SmartLogon भनिन्छ एक रोचक सिस्टम संलग्न। यो आफ्नो शारीरिक उपस्थिति को आधार मा प्रयोगकर्ता authorizes। र यो ल्यापटप सुविधाहरू बिर्सनुहुन्न। यो मान्यता प्रक्रिया मा मतलब प्रकाश, headgear उपस्थिति र यति मा। डी यो सिस्टम थप सुरक्षा प्रदान गर्दछ असर गर्दैन।
ASUS A52J: समीक्षा
कुनै एक सही र जीवन्त साधारण उपभोक्ताहरु रूपमा, एक उत्पादन को फाइदा र बेफाइदा वर्णन। अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूले एसस देखि ल्यापटप मन परायो। नियम, यो अपेक्षाकृत उच्च प्रदर्शन, संकुचित आकार, स्टाइलिश डिजाइन, र यति मा। साथै डी, धेरै लाईक बोल्ड नयाँ गर्दा ल्यापटप अन्तरक्रिया थपियो सुविधा प्रदान प्रविधिहरू लागि प्रशंसा गरिन्छ। अर्को फाइदा - मूल्य। ल्यापटप एसस अपेक्षाकृत पहुँच A52J। प्रविधिको यो चमत्कार हासिल गर्न, 40 हजार rubles भुक्तानी गर्न हुनेछ।
को कमियां लागि, केही मानिसहरू ध्वनि गुणवत्ता र एक निर्मित क्यामेरा सन्तुष्ट छन्। अर्को नकारात्मक - ब्याट्री। ब्याट्री काम गर्दा घण्टा एक जोडी मा बस्छन। जबकि समस्या पूर्ण हल छ। तपाईं बस स्क्रिनको चमक कम र मोड सेव शक्ति सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ।
ASUS A52J - उत्कृष्ट ल्यापटप राम्रो नै देखाउँछ कि "मूल्य-गुणवत्ता" को आदर मा। यो यन्त्र काम को लागि आदर्श छ। पहिलो, ल्यापटप एकदम फलदायी छ। यो अनुमति दिन्छ तपाईंलाई छिटो र लगातार मानक सफ्टवेयर काम गर्न र यस्तो "Photoshop" को रूपमा पनि उच्च अन्त ग्राफिक्स सम्पादक। दोश्रो, को एसस A52J कहिलेकाहीं उपकरणको उपयोगिता वृद्धि उपयोगी सुविधाहरू धेरै बुझे। यो यन्त्र काम प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण सान्त्वना र सुविधा निम्ति आदर्श छ।
ध्वनि एक ल्यापटप गायब। Windows7वा XP को लागि के गर्न सकिन्छ
विशेषताहरु एसर Aspire V5 572G
ल्यापटप स्मृति: प्रकार र वृद्धि गर्ने उपायहरू
ल्यापटप लेनोभो T400: सुविधा र समीक्षा
ब्राट्सक आकर्षण, वर्णन, फोटो
फोन नोकिया 5530 Xpressmusic: विवरण, वर्णन, ग्राहक समीक्षा र समीक्षा
आफ्नो हातले शंकु देखि चित्रा। को शंकु देखि के गर्न सकिन्छ?
मृत सागर: एक अद्वितीय स्थान मा आराम र उपचार
को "stagecoach" - Leningrad वा Borisoglebsk?
UAZ-29891: विनिर्देशों र समीक्षा